10/24/13 ~ Myanmar Forward
ဗြိတိန်၏ အချမ်းသာဆုံး လူငယ်စာရင်းတွင် ပါဝင်လာသည့် ရိုစီဟတ်တင်ဂမ်
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အသက်(၂၆)နှစ်ရှိ စူပါမော်ဒယ်လ်သည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပိုင်းများအတွင်း ပိုမိုအောင်မြင်ကျော်ကြား လူသိများလာသလို ဝင်ငွေအရလည်း တိုးပွားပိုင်ဆိုင်လာရာ ဗြိတိန်၏ အသက်(၃၀)အောက် အချမ်းသာဆုံး စာရင်းတွင် အဆင့်(၂၇) ချိတ်ခဲ့သည်။
ဗြိတိန်၏ အသက်(၃၀)အောက် အချမ်းသာဆုံး လူငယ်အယောက်(၃၀) စာရင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရိုစီ ဟတ်တင်ဂမ် ဝှစ်တလီ ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်သည်။ အသက်(၂၆)နှစ်ရှိ စူပါမော်ဒယ်လ်သည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပိုင်းများအတွင်း ပိုမိုအောင်မြင်ကျော်ကြား လူသိများလာသလို ဝင်ငွေအရလည်း တိုးပွားပိုင်ဆိုင်လာရာ ဗြိတိန်၏ အသက်(၃၀)အောက် အချမ်းသာဆုံး စာရင်းတွင် အဆင့်(၂၇) ချိတ်ခဲ့သည်။ ယခုစာရင်းကို ပြုစုသည့် Heat မဂ္ဂဇင်းက လာမည့် နှစ်များအတွင်း ရိုစီအနေဖြင့် ယခုထက် အဆင့်တက်လာဦးမည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားသည်။ သို့သော်လည်း Transformers: Dark of the Moon မင်းသမီးသည် ဂီတနှင့် ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှ စူပါစတားများနှင့် ယှဉ်လျင်မှု ဓနအင်အား ကြီးကြီးမားမား ကွာဟနေဆဲ ဖြစ်သည်။
Victoria's Secret မော်ဒယ်လ်သည် ပေါင်စတာလင် (၅.၆)သန်းမျှသာ ကြွယ်ဝသော်လည်း ထိပ်ဆုံးနေရာမှ အမျိုးသား ဂီတအဖွဲ့ One Directionက စတာလင်ပေါင် (၅၉.၃၃)သန်းထိ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဒုတိယ နေရာတွင်မူ Harry Potter ဇာတ်ဆောင် ဒန်နီရယ်လ် ရက်ကလစ်ဖ်က ပေါင်စတာလင် (၅၆.၁၉)သန်းဖြင့် ရပ်တည်နေသည်။ လူတစ်ဦးချင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ် တွက်ချက်မည် ဆိုပါကမူ ဒန်နီရယ်လ်သည် ဗြိတိန်၏ အသက်(၃၀)အောက် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ညွှန်းဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နောက်တွင် ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်၊ ကီရာနိုက်တလေ၊ အမ်မာဝပ်ဆန်၊ အဒဲလ်၊ ရူးပတ်ဂရန့်တ်၊ ကယ်လ်ဗင်ဟားရစ်နှင့် ချယ်ရီကိုးလ်တို့က အစဉ်လိုက် ရပ်တည်လျှက် ရှိသည်။
ဒီဗွန်တွင် မွေးဖွားသည့် ရိုစီသည် Transformers: Dark of the Moon ဇာတ်ကား၏ အောင်မြင်မှုများကြောင့် ဝင်ငွေတိုးပွားမှုအတွက် အထောက်အကူ ရရှိခဲ့သလို ဖက်ရှင်မော်ဒယ်လ် ကဏ္ဍတွင် စာချုပ်သစ် အများအပြား ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်းကလည်း သူမ၏ ဓနအင်အား တိုးပွားမှုအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အသက်(၁၆)နှစ် အရွယ်က မော်ဒယ်လ် အေဂျင်စီ တစ်ခုနှင့် စတင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ရိုစီသည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Victoria's Secret၏ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး Burberryကဲ့သို့ အထင်ကရ ဖက်ရှင် အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် ကိုယ်စားပြုခွင့်လည်း ရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုင်း ဘုရင့်ဂူ သင်္ချိုင်းအောက် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ တွေ့ရှိ
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under သတင်းများ | No comments
လင်ဇင်းကုန်း သုသာန်နေရာကို မဟာထေရ ဥဒုမ္ဗရ သမိုင်းဝင် ရင်ပြင်တော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေသည် (ဓာတ်ပုံ – တေဇလှိုင် / ဧရာဝတီ)
ထိုင်းဘုရင့်ဂူ ရှိရာ အမရပူရ လင်ဇင်းကုန်း သင်္ချိုင်း၏ အောက်တွင် ရှေးဟောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဟု ယူဆရ သည့် ကျောင်းဆောင် တဆောင် ကို ရှေးဟောင်း သုတေသီများက ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရဟန်းဝတ်ဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသွားသော ထိုင်းဘုရင်ဟောင်း၏ ဂူသင်္ချိုင်းကို တူးဖော်ရာမှ ပေ ၆၀ ခန့်ကျယ် သည့် ကျောင်းမကြီးနှင့် တခြားသော အဆောက်အအုံများ၏ အုတ်မြစ်များကို တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထိုင်း ရှေးဟောင်း သုတေသန တူးဖော်ရေးတာဝန်ခံ မစ္စတာ မစ်ကီဟတ် က ပြောသည်။
“ဘယ်ဆရာတော် သီတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းလို့တော့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပေမယ့် ထိုင်း ဘုရင်ကြီး တည်ခဲ့တဲ့ စေတီနားမှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဘုရင်ကြီးအဆက်အနွယ် ထိုင်းဘုန်းကြီးတွေ သီတင်းသုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက် ၁၇၆၇ ခုနှစ် အယုဒ္ဓယသို့သွားရောက် စစ်ပြုရာ သဖန်းပွင့် မင်းသား ဘွဲ့ခံ ထိုင်းဘုရင် ကျောက်ဘွားဒေါက် မဒူဝါး (ခ) မင်းသားကြီး ဥတွန်ပုံ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့်အပြင် ညီတော်၊ နှမတော်၊ မိဖုရား၊ မောင်းမမိဿံ၊ သူဌေးသူကြွယ်၊ ပန်းတိမ်၊ ပန်းပဲ၊ ပန်းရံ၊ ရွှေခြည်ထိုး လက်မှုပညာသည်များ၊ အဆိုအတီးပညာရှင်များ၊ အချက်အပြုတ် ကျွမ်းကျင်သူများမှအစ အားလုံးကို သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး၌ အမရပူရ တွင် ထီးနန်းစိုက်သည့် ဘကြီးတော်ဘုရား လက်ထက် ဘွဲ့တံဆိပ်များ ဆက် ကပ်လှူဒါန်းခံရသည့် သံဃာတော်များတွင် ယိုးဒယား ကျောင်း ဆရာတော် ရှင်တိသရဏ လည်း ပါရှိသည်။
ယခုတွေ့ရှိသည့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံကြီး၏ ပရ၀ုဏ်မှာ ၅ ဧက နီးပါးခန့်ကျယ်ပြီး ယခုအခါ အလုပ်သမား ၁၀၀ ခန့်ဖြင့် ဆက်လက် တူးဖော်နေသည်။
“တူးဖော်နေတဲ့ အဆောက်အအုံ အုတ်မြစ်တွေကိုပဲ သေချာတူးပြီး အဲဒီအဆောက်အအုံ ပုံစံ အသေးအလေး ကိုပဲ မြေလွတ်တဲ့နေ ရာ မှာဆောက်မယ်”ဟု မစ်ကီဟတ်က ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ တင်မောင်ကြည်က ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ မှန်သော်လည်း သမိုင်းရှု့ထောင့် မှ ကြည့်လျှင် ထိုင်းဘုရင်နှင့် ထိုင်းရဟန်း သီတင်းသုံးခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းကျောင်းကြီးဟု တပ်အပ်မပြောနိုင်ကြောင်း၊ ဇရပ်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ဒီကျောင်းက ထိုင်းဘုရင် ကျောင်းလို့ ပြောလို့မရဘူး၊ ဒီနေရာမှာ တခြား ဆရာတော်ကြီးတွေလည်း ကျောင်းထိုင်သွားမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမရပူရ မြို့တည်နန်းတည် ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တွင် ပျံလွန်တော်မူသွားသည့် ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်သော တောင်ဘီလူး၊ ပျိုပန်၊ ဆုံထား ဆရာတော်ကြီးများ သီတင်းသုံးခဲ့ရာ ကျောင်းကြီးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေါက်တာ တင်မောင်ကြည်က ထောက်ပြ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလက လင်းဇင်းကုန်းမှ တူးဖော်ရရှိသည့် ထိုင်းဘုရင်ဟောင်း ဥတွန်ပုံ၏ သပိတ်ဟု ယူဆရသည့် အိုးအတွင်း မှ ရရှိသော အရိုးနှင့် ခါးပန်းကြိုးတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ရှိရသည့်အရာများသည် မြန်မာ ဆရာတော်ကြီးများ၏ ပစ္စည်းများ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် တွေ့ရှိသည့် အရိုးများကို သိပ္ပံနည်းကျ DNA တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်သည်ဟုလည်း ဒေါက်တာ တင်မောင် ကြည် က ဆိုသည်။
ယခုအခါ အမရပူရ လင်းဇင်းကုန်း သုသာန် တ၀ိုက်ကို ထိုင်း ရှေးဟောင်း သုတေသန အဖွဲ့က ရှင်းလင်းကာ တူးဖော်လျက်ရှိပြီး အင်းဝရောက် ထိုင်းလူမျိုးများ နေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းပြတိုက်တခု ဖွင့်လှစ်ရန်လည်း စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက စည်းစိမ်ခံလွန်းသည့် ဂျာမန်ဘုန်းတော်ကြီးကို တာဝန်ဆိုင်းငံ့
ဂျာမန် ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန့်ဇ်ပီတာ တီဘတ်ဇ်ဗန်အက်စ်သည် ဒေါ်လာ (၄၂)သန်း တန်ဖိုးရှိသည့် ခမ်းနား ထည်ဝါလှသည့် ကျောင်းအဆောက်အအုံသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်ဆစ် အနေဖြင့် စည်းစိမ်ခံလွန်းသော ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် နာမည်ကြီးနေသည့် ဂျာမန်ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးကို လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆိုင်းငံ့ထားစေခဲ့ပြီဟု သိရသည်။ ဂျာမန် ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန့်ဇ်ပီတာ တီဘတ်ဇ်ဗန်အက်စ်သည် ဒေါ်လာ (၄၂)သန်း တန်ဖိုးရှိသည့် ခမ်းနား ထည်ဝါလှသည့် ကျောင်းအဆောက်အအုံသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယင်းပရောဂျက်သည် မူလ လျာထားသည်ထက် (၆)ဆမျှ အကုန်အကျ ပိုများခဲ့ပြီး ဝေဖန်စရာ အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဗာတီကန် နန်းတော်က ပုပ်၏ မိန့်ကြားမှုဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန့်ဇ်ကို လုပ်ငန်းတာဝန် ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယင်းသက်ရောက်မှု မည်မျှ ကြာမြင့်မည်ကို တိတိကျကျ မသိရသေးချေ။
ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန့်ဇ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ကာလအတောအတွင်း လက်ထောက်ဖြစ်သူ ဘုန်းတော်ကြီး ဝုလ်ဖ်ဂန်းရို့ခ်ျက ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်သည်။ အသစ်တည်ဆောက်သည့် အဆောက်အအုံ၏ တန်ဖိုးမှန် ထွက်ပေါ်လာသည့်နောက် လင်းဘာ့ဂ်မြို့မှ ဘုန်းတော်ကြီးသည် အလွန် ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနိုင်သူ၊ စည်းစိမ်ခံလွန်းသူအဖြစ် ပြစ်တင်မှုများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဗာတီကန်သည် အဆောက်အအုံ စတင်တည်ဆောက်ရန် စီမံကိန်းကို စာရင်းစစ်များ စေလွှတ် စစ်ဆေးခဲ့ဖူးသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန့်ဇ် သီတင်းသုံးမည့် နေရာသည် စာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့်ထက် များစွာ တန်ဖိုးပိုကြီးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under ပေးစာ | No comments
မကြာခင်လတ်တလောမှာ မြန်မာနိုင်ငံ နာမည်ရှိ မြို့ကြီးတော်တော်များများ မှာ ဗုံးကွဲဗုံး လန့်မှုတွေဖြစ် ခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်တယ်။ ဗုံးဖောက်တဲ့တရားခံ တွေ ဟာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါတွေ ဆိုတာ သိရှိဖော် ထုတ်ပြီး ဖြစ်သလို KNU လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း က ရာထူး အဆင့်တစ်ခု ရှိတဲ့ လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ လည်း အားလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အပါအ၀င် ၊ အကြီးအကဲ အားလုံးဟာ လက်ရှိဆွေးနွေး ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပွဲတွေကို မထိခိုက်စေလိုတဲ့အတွက် Hightlight လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း မရှိသ လို ၊ KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ အနေနဲ့လည်း ဒါကို ၀ိုင်းဝန်း အဖြေရှာ ကြမယ့် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားရတဲ့ အတွက် အထူးတလည်ဝမ်းသာမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းက အခြေအနေကို ပြန် ဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ်။ ဒီလို ဆန်း စစ်ကြည့်မိလို့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် ချင်နေသလားလို့ မေးရင်လည်း ခံရယုံပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိတ် ဆိုတာ သုံးသပ် မှတ်သား နေဖို့ ဖြစ်သလို ပစ္စုပ္ပန် ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နမူနာ ယူရမယ့် အရာလည်းဖြစ်တယ်။
စစ်အစိုးရ လက်ထပ် က လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူ ဆိုတာ နယ်စပ်မှာ ပြည်ပြေး အဖွဲ့တွေ နဲ့ ပူပေါင်း ရပ်တည်နေ ရတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကနေ သမ္မတ အစိုးရ လက်ထက် ရောက်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကား လုံးအောက် မှာ ဆွဲသွင်းဖို့အတွက် နယ်စွန်နယ်ဖျားကနေ ဆွေးနွေးပွဲ အဆောက်အဦးတစ်ခု ထိ ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့လို ဆွေးနွေးတာ မကောင်း လို့လား ၊ အနှစ် ၆၀ ခန့်ကြာတဲ့ ပြည်တွင်း စစ်ကြီး ငြိမ်းသွားမှာ မောင်ရင်က မလို လားလို့လား ဆိုရင်တော့ (ခပ်မြန်မြန်ပဲ ငြင်းမိမှာပါ )ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံ ကြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ရပ်တည် ပြီး တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးနေတာကို မြင်လို လှတာကြောင့် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးရတာပါ။ ဘာကြောင့် နောက်ကြောင်း ပြန်ပြောနေလဲ ဆိုရင်တော့ သမိုင်းဆိုတာ အတိတ်က လာသလို လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်း ထပ်ဟပ် အရောင်ထိုးနေတာမို့ပါ။ ယခင်က နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ကြီးစိုးတဲ့ လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူတွေ ဟာ အတင်းအဓမ္မဆက်ကြေးကောက် ၊ လူသစ်စု လုပ်ရပ်တွေ ဟာ အခု အခါမှာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးအောက်မှာ အသာခိုကပ်နေရင်း ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေ တောင်း ၊ အဲ့နယ်မြေ အတွင်း ပြည်သူလူထု ကို ဆက်ကြေး ကောက် ၊ လူသစ်စု အလုပ်တွေဟာ အခု အခါမှာ တရားဝင်လုပ်ခွင့်ရသလို သဘောထားလာကြပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ကိုင် နေကြတာတွေ ရှိလာပါ တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးအောက် ခိုကပ်နေရင်း ဒီအခွင့်အရေးတွေနဲ့ စိတ်ကြိုက် ကစား ကွက် ပြင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေအပေါ် ဘယ်သူမှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမယ့် သူ မရှိသလို ၊ ဒါ့ထက် ဆိုး လာရင်တော့ ရာဇ၀င်ကျော် တပ်မတော် ကိုပဲ “မင်းသွားတိုက်ချေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးလိုက်မဟဲ့ လို့ စိတ်ကူးနေ ရင်တော့ ..တော်လောက်ပါပီ တပ်မတော် လည်း အနှစ် ၆၀ နီးပါး ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ နှစ်ပါး သွားခဲ့ ရတာပဲ နိုင်ငံရေးသမားများကို အင်မတန် ကျေးဇူးတင်နေရပါပီ။ အခုလက်ရှိအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကြိုးပမ်း နေကြ တာ ဟာ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု ထိ အချိန် ဆွဲထား တာဟာ ကစားကွက်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင် ဆင်ခွင့်ပေးနေသလားလို့ ထင်မိပါရဲ့ ။
ကဲ အခု အစိုးရအသစ်အနေနဲ့ သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း နယ်စပ်ဒေသ တွေကနေ စားပွဲ ၀ိုင်းတွေ အထိ ခေါ်လာခဲ့ပါပြီ ။ ဒီအပေါ်မှာ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူတွေဟာ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက် စွပ် အလုပ်အမျိုး လုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူတွေများ တာဝန်ခံမလဲ ? အခုလက်ရှိ ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီ ရ မိထားတဲ့ တရားခံတွေက ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခု ရှိတဲ့ သက်သေ တွေ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့နီးပါး ဗုံးပေါက်နေပါစေအုံး တပ်မတော် ကို နိုင်ငံရေး လောက က အပြီးအပိုင်နှုတ်ထွက်ဖို့ အပြင်း အထန် ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ကဲ တပ်မတော် က နိုင်ငံရေး လောက က နှုတ်ထွက် သွားပြီ သဘော ထားကြပါစို့ ။ အခု ဗုံးထောင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ၊ ဗုံးလန့်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ၊ ဗုံးဖြုတ်ဖို့ ကိစ္စတွေ ကို ၊ ဗုံးဖောက် တာတွေ တားဆီးဖို့ ကိစ္စတွေကို ဘယ်သူတွေတာဝန်ယူမှာလဲဆိုတာကတော့ သိချင်မိတာ အမှန် ပါပဲ။
အိမ်ခြေယာခြေမဲ့နှစ်ဦးက ကလေးမွေးစားပြီး တောင်းရမ်းစားသောက်ခိုင်း
ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်၌ ဂရိရဲများက Roma ရှိ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့နယ်မြေသို့ ဝင်ရောက် စီးနင်းစစ်ဆေး ရာတွင် အသက်(၄၀)နှစ်အရွယ် Eleftheria Dimopoulou နှင့် အသက်(၃၉)နှစ်အရွယ် Hristos Salis တို့ရဲ့ သမီးဆိုသူ Maria အား ရဲများက တွေ့ရှိခဲ့သည်သည်။
Maria ဟာ Eleftheria Dimopoulou နှင့် Hristos Salis တို့နဲ့ လားလားမှမတူ ကွဲပြားစွာ အသားဖြူ ၊ ငွေရောင်ဆံပင်နှင့် မျက်လုံးပြာလေးဖြစ်နေသည့်အတွက် ရဲများက DNA စစ်ဆေးကြည့်ရာ DNA စစ်ဆေးချက်အရ သွေးသားလုံးဝ ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် စာရွက်စာတမ်း ၊ အထောက်အထားအမှားများ ပြောဆိုသော Eleftheria Dimopoulou နှင့် Hristos Salis တို့အား ကလေးကို ဖျားယောင်းသိမ်းသွင်းမှု ၊ အထောက်အထားအမှားများ တင်ပြမှုတို့ဖြင့် အမှုစွဲထားကြောင်း သိရသည်။
ယခု လေး ငါးနှစ် အရွယ်ခန့်ရှိသော Maria အား ဂရိနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Farsala မြို့ အစွန်နားမှာရှိတဲ့ Tabakou က အိမ်ခြေယာမြေမဲ့များ နေထိုင်သည့် ဂျစ်ပစီနယ်တွင် အုတ်ဖြင့်သီးသန့်ဆောက်ထားသော အခန်းအတွင်း၌ တွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်အထားများ မရရှိသေးပေမယ့် Eleftheria Dimopoulou နှင့် Hristos Salis တို့ဟာ Maria အား အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ်တိုင်အောင် ကြီးပြင်းသည်အထိ စောင့်ရှောက်ကာ (၁၂)နှစ်အရွယ်တွင် ကလေးသတို့သမီးအဖြစ် ရောင်းစားဖို့ ကြံစည်မွေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဂရိရဲများက သံသယရှိခဲ့သည်။
လောလောဆယ်တွင်မူ Salis နှင့် Dimopoulou တို့က Maria လေးအား ကခုန်စေပြီး ပိုက်ဆံတောင်းရမ်းခိုင်းသည်ဟု ရဲများက စစ်ဆေးတွေ့ရှိကာ သက်သေအထောက်အထား ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့ အိမ်နီးချင်းများ၏ အပြောအရမူ ကလေးပေါက်စအရွယ် Maria လေးအား ဘူဂေးရီးယား စုံတွဲထံမှ စတာလင်ပေါင် ၈၅၀ ဖြင့် Salis နှင့် Dimopoulou တို့က ဝယ်ယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရဲများ၏လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ဘူဂေးရီးယားမှ ကလေးများကို ဂရိနိုင်ငံသို့ မှောင်ခို ခိုးသွင်းရောင်းချနေသည့်ဂိုဏ်းက ချမ်းသာသည့် ဂရိစုံတွဲသို့ Maria အား စတာလင်ပေါင် နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်အထိ ဈေးခေါ်ရောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဂရိရဲများက သံသယရှိထားသည်။
မိုင်လီနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများအပေါ် အလေးမထားသည့် ဆယ်လီနာ
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
မိုင်လီသည် ယခုအခါ လူငယ်ပုံရိပ်ကို လုံးဝစွန့်ခွာပြီး ညှို့ဓာတ်ပြင်းပြသည့် အဆိုတော် တစ်ဦးအဖြစ် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီး ယင်းအခြေအနေသည် ဆယ်လီနာ့အပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ဝေဖန်မှု၊ အကြံပြုမှုများအပေါ် သူမအနေဖြင့် နားယောင်မည် မဟုတ်သလို ကိုယ်ပိုင် အမြင်ဖြင့်သာ ရှေ့ဆက်မည်ဟု ဆယ်လီနာဂိုမက်ဇ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆယ်လီနာနှင့် မိုင်လီတို့သည် အသက်အရွယ် မတိမ်းမယိမ်း ရှိကြသလို ကလေးသရုပ်ဆောင် ဘဝကတည်းက Disneyက စင်တင်ပေးခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။ မိုင်လီသည် ယခုအခါ လူငယ်ပုံရိပ်ကို လုံးဝစွန့်ခွာပြီး ညှို့ဓာတ်ပြင်းပြသည့် အဆိုတော် တစ်ဦးအဖြစ် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ပြီး ယင်းအခြေအနေသည် ဆယ်လီနာ့အပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Disney၏ တက်သစ်စ ကြယ်ပွင့်လေးများအဖြစ် အတူတကွ တောက်ပခဲ့ဖူးသော မိုင်လီနှင့် မိမိတို့ကြား အရာရာ တူညီအောင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်မည် မဟုတ်ဟု ဆယ်လီနာက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အသက်(၂၁)နှစ်ရှိ ဆယ်လီနာက "နေ့တိုင်းလိုလို ကျွန်မကို အကြံပေးနေတာတွေ အများကြီး ကြုံရတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး Sexyဖြစ်သင့်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး အေးဆေး တည်ငြိမ်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်လာအောင် ဘာမှ ပြောင်းလဲနေစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအခန်းထဲကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျွန်မကို ချစ်တဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ မဟုတ်လား"ဟု ဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ခုတွင် ပရိသတ်များအား ရည်ရွယ် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရေဒီယို အစီအစဉ် တစ်ခုတွင် ဆယ်လီနာအား မိုင်လီကဲ့သို့ ဝတ်လစ်စားလစ် ဂီတဗီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်ကူးရန် အစီအစဉ် ရှိမရှိ မေးမြန်းရာ ဆယ်လီနာက "ဒီမှာရှင့်။ ကျွန်မက လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး ဆိုတာတွေ မပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆနဲ့ ရွေးချယ်မှု ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ခရီး ကိုယ်သွားနေတာပါပဲ။ အဆုံးတစ်နေ့မှာ ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အရာကို ချစ်ခင်သင့်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ခံစားယုံကြည်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ ဒါဟာ ပုံသေနည်း တစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု လုပ်မလား ဆိုတာကိုလည်း မသိသေးပါဘူး"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမက "ကျွန်မဟာ (၁၅)နှစ် သမီးလို ခံစားဖူးတယ်။ (၂၁)နှစ် အရွယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ခံစားချက်လည်း ရှိတယ်။ အိမ်မှာထိုင်ပြီး Friends ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ကြည့်မိတဲ့အခါ အသက်(၃၀)အရွယ်လို ခံစားမိလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့ အရွယ်က စပ်ကူးမတ်ကူး အခြေအနေအတွက် အပြည့်အဝ သင့်တော်ပြီလား ဆိုတာကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် တကယ်ပဲ အဖြေမရှာတတ်ဘူး"ဟုလည်း ဖွင့်ဟသွားသည်။
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under အနုပညာ | No comments
နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမှာ သီ ချင်းတွေသွားဆိုမယ်။ ပွင့်လင်းရာသီ ဆိုတော့နယ်ရှိုးတွေတောက်လျှောက် ဆိုဖို့ရှိ ပါတယ်။ ပြီးတော့ Shwe FM လေးနှစ်ပြည့်မှာလည်း မသီရိဆွေနဲ့ အတွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒုတိယ အခွေပစ် တိုင်းတောင် ကိုဇန်န၀ါရီလ ကုန်မှာထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေ ပါတယ်။ သီချင်းလေး ပုဒ်လောက် က တော့အချောပြီးသွားပါပြီ။ တေးရေး တွေကတော့ သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ ကိုလွှမ်းပိုင်၊ ရဲရင့်အောင်၊ သားသား တို့ကို သီချင်းတွေအပ်ထားပါတယ်။
မိစန္ဒီကအခုအခွေမှာသီချင်းခြောက် ပုဒ်လောက်ရေးထားပါတယ်။ ပြီးမှ ရွေးထုတ်သွားမှာပါ။ တေးရေးဆရာ တွေရဲ့ ပုံစံတွေနဲ့လည်းအားလုံး ညှိ ပြီးလုပ်သွားမှာပါ။ ပစ်တိုင်းထောင် ဆိုတဲ့ Title လေးပေးဖြစ်ပုံကတော့ ပစ်တိုင်းထောင် အရုပ်လေးတွေက လဲကျလည်းခဏပဲပြီးရင်ပြန်ထောင် နေတာပဲလေ။ မိစန္ဒီလည်း စိတ် ညစ်စ ရာတွေကြုံလာ ရင် ပစ်တိုင်း ထောင်လေးလိုပြန်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပေးဖြစ်တာပါ။ ပြီးတော့ ပစ်တိုင်းထောင် ဆိုတဲ့သီချင်းက လူ ငယ်တွေအတွက် ဘ၀သင်ခန်းစာ ပေးမယ့်သီချင်းဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည် ပါတယ်။ Music ပုံစံအနေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အသစ်အဆန်းလေး တွေချပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိစန္ဒီက ကိုယ့်ပုံစံ တစ်ခုတည်း မကြိုက်ပါဘူး။ Hip Hop နဲ့ R&B ပုံစံလေးတွေ ရယ် ပရိသတ်ကြိုက်မယ့် Music ပုံစံဆန်းဆန်းလေးတွေ ကိုရောပြီး အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အနုပညာကိုလွတ်လပ်တယ်လို့ခံယူ ထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ပရိသတ် ကြီးလည်း Music ကို လွတ်လွတ် လပ်လပ်ခံစားစေချင်ပါတယ်။ ပရိ သတ်ကြီးကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာ ပါစေ။ ပထမအခွေ မိုနိုပိုလီကို အားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒုတိယအခွေပစ်တိုင်းထောင်ကို လည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ယင်းနောက် အဆိုပါ မွေးကာစ ကလေးငယ်မှာ မီးရထား သန့်စင်ခန်း အပေါက်မှ ရထားလမ်း ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ သော်လည်း ကံကောင်းထောက်မစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမရှိဘဲ အသက်ရှင်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာဖရိုဇာ ဘီဘီအမည်ရှိ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် သူမ၏ သမီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် ရီဟာနီ ဘီဘီနှင့် ယင်းခရီးသည်တင် ရထားပေါ်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါ ခဲ့ကြောင်း၊ ရီဟာနီသည် ၎င်း၏ ကလေးငယ် ပျက်ကျပြီးနောက် သန့်စင်ခန်း အတွင်း ငိုနေစဉ် မိခင် ဖြစ်သူက ငိုသံကြား၍ သန့်စင်ခန်းသို့ အမြန်သွားခဲ့ရာ အကြောင်းစုံကို သိရှိခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အာဖရိုဇာသည် ခရီးသွားများကို ဖြစ်စဉ်အား ပြောပြ၍ အကူအညီ တောင်းခဲ့သည်။
ခရီးသည်များက ရထားကို ရပ်ခိုင်း ခဲ့ပြီး မွေးကင်းစကလေးကို ကယ်တင်ကာ မိခင်နှင့် ကလေးဖြစ်သူ နှစ်ဦးစလုံးကို ပါလာရှီ ဘူတာရုံရှိ ရှေးဦး ပြုစုရေးနှင့် ကုသရေးဌာနသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ မိခင်နှင့် ကလေးနှစ်ဦး စလုံးမှာ ကျန်းမာလျက် ရှိပြီး အံ့သြစရာ ကောင်းစွာဖြင့် ကလေးငယ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း သိရ သည်။
ဓားစာခံများ အပြန်အလှန် လဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ ဆီးရီးယားက အထိန်းသိမ်းခံ အမျိုးသမီးများ ၁၄ဦးကို လွှတ်
ဆီရီးယားအာဏာပိုင်များက ဓားစာခံများအပြန်အလှန် လွှဲပြောင်းရေး သဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း အဖြစ် နိုင်ငံ တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော အမျိုးသမီး ၁၄ဦးကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့က ဆက်လက် လွှတ်ပေးရမည့် အမျိုးသမီး အကျဉ်းသား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ကျန်ရှိနေသေး သည်ဟု အောက်တိုဘာ ၂၂ရက်က ဆိုသည်။
ဆီရီးယားမြောက်ပိုင်း သောင်းကျန်သူအဖွဲ့မှ ၁၇လ ကြာထိန်းသိမ်းထားသော လက်ဘနွန်သား ကိုးဦးကိုလည်း စနေနေ့ လွှဲပေးခဲ့သည်။ သူတို့သည် သြဂုတ်လတွင် လက်ဘနွန်၌ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရသော တူရကီလေယာဉ်မှူး နှစ်ဦးနှင့် လဲလှယ် ရန်ဖြစ်သည်။ ယခု ဓားစားခံများ အပြန်အလှန် လွှဲပြောင်ရေးသည် ဆီရီးယား၊ တူရကီ၊ ကာတာနှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတို့ အကြားက သီးခြားအစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ယခုနောက်ဆုံး လွှတ်ပေးခဲ့သော အမျိုးသမီး ၁၄ဦးအနက် တစ်ယောက်သည် နှစ်ကြိမ်တိတိ အဖမ်းခံခဲ့ရသော ကင်ဆာရောဂါသည် တစ်ဦးလည်းပါ၏။ သူမ၏ ခင်ပွန်းမှာလည်း ဆီရီးယား၏ ၃၁လကြာ ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲများအကြား အသတ်ခံ ခဲ့ရသည်။ လက်ရှိအချိ်န်တွင် ဆီရီးယားမှ အမျိုးသမီး အကျဉ်းသား ၁၂၈ဦးကို လွှတ်ပေးရန် ကျန်ရှိနေကြောင်း၊ အမည်စားရင်း တိတိကျကျ ပြုစုထားကြောင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ဆိုသည်။
သို့သော် ဒမတ်စကတ်အစိုးရက အကျဉ်းသားများနှင့် ပတ်သတ်၍ ထင်မြင်ချက်တစ်စုံတရာ မပေးဘဲ ရှိနေခဲ့သည်။ ဆီရီးယားတွင် ယင်းသို့ အဖမ်းခံခဲ့ရသူများသည် တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲ ထင်သလိုစွပ်စွဲချက် မျိုးစုံနှင့် အတင်းအကျပ် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံကြရလေ့ရှိသည်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်သည် လက်ရှိဇနီးသည် ရီဆိုဂျူနှင့် လက်ထပ်ခါနီး ဆဲဆဲတွင် အခြားအနုပညာ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သော Seo Un-hyang နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့သည်ဟူသော ကောလာဟာလများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုကာလများတွင် လက်ရှိဇနီးသည် ရီဆိုဂျူမှာ First Lady နေရာအတွက် ပြိုင်ဘက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။
Seo Un-hyang သည် ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလက ကင်ဂျုံအီကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျင်းပသည့် ဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ပွဲတွင် အန်ဟာဆု သံစုံတီးဝိုင်းနှင့်အတူ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ် စတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ထိုပွဲကို မစ္စတာကင်မ်က တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။ တောင်ကိုးရီးယားမှ Chosun Ilbo သတင်းစာ ကလည်း Seo သည် တက္ကသိုလ်တွင် ဂီတပညာကိုသင်ယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဇာတ်ကားများတွင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
Seo သည် သီးချင်းအဆို ကောင်းသလို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလည်း ထက်မြက်ကြောင်း၊ မြောက်ကိုးရီးယား ခေါင်းဆောင် ရှေ့တွင် ဖျော်ဖြေနေစဉ် သူ၏ မှားယွင်းမှုများကို ရယ်ကာမောကာ ဖြတ်ကျော်ရဲသူလည်းဖြစ် ဆိုကြသည်။ သူမသည် စစ်သည်ဘ၀ ထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ ကင်မ်ဂျုံအန်သည် သူမ၏ အနောက်တိုင်းဆန်သည့် အမူအယာများအပေါ် မျက်စိကျခဲ့သည် ဟု သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။
ကင်မ်ဂျုံအန်သည် မစ္စက်ရိကို လက်မထပ်မီအချိန်က Seo ရွေးချယ်ရန် ကြံခဲ့သော်လည်း သူ၏ အနီးကပ်အကြံပေးများက မစ္စက်ရိကိုသာရွေးရန်၊ သူမသည် မြောက်ကိုရီးယားကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ကင်မ်အီဆန်၏ ဇနီးသည် ဆင်တူသည့် အချက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများက ကင်မ်ဂျုံအန်သည် သူ၏ အဖိုး ကင်မ်အီဆန်၏ အမူအယာနှင့် ဖက်ရှင်ကို အတုခိုးထားကြောင်း၊ ဆံပင်ပုံစံမှ အစ မော်စတိုင်-ကိုယ်ကျပ်ခါးတိုအင်္ကျီများ ၀တ်ဆင်ပုံများမှာလည်း ပုံစံတူဖြစ်နေကြောင်း ဆိုကြသည်။ လက်ရှိဇနီးသည်ကို အလျင်အမြန် ရွေးချယ်မိခြင်းမှာ သူ၏ ငယ်ရွယ်သည့် အသက်ရွယ်အရ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြ သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် Miss Seo မှာ အန်ဟာဆု သံစုံတီးဝိုင်း၌ပင် သူမ၏ အဆိုကျော်ဘ၀ကို ဆက်လက်ရှင်နေလျှက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ သတင်းများထွက်ပေါ်လာခြင်းမှာလည်း မြောက်ရီးယားမှ နာမည်ကျော် တေးဂီတပညာရှင်များနှင့် အဆိုတော်အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အတင်းအဖျင်း စကားများ၏ သားကောင်ဖြစ်ရသလား၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လား ဆိုသည်က်ိုမူ မည်သူကမှ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါ။
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မုံရွာ၊ အောက်တိုဘာ ၂၃
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနယ်မြေ အတွင်းရှိ ဆည်းတည်း ကျေးရွာနင့် မိုးကြိုးပြင် ကျေးရွာကြားတွင် လျော်ကြေး မယူထားသော ယာမြေများ၌ စိုက်ပျိုးထားသော ပဲစင်းငုံနှင့် နှမ်း စိုက်ခင်းများကို ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများက ဘူဒိုဇာဖြင့် ထိုး၍ ဖျက်ဆီးခဲ့မှုကြောင့် အောက်တို့ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒေသခံများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း မိုးကြိုးပြင် ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၂ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများက ရဲတပ်ဖွဲဝင်များ၏ အကာအကွယ်ဖြင့် လျော်ကြေးငွေ ရယူထားခြင်း မရှိသော ယာမြေတွင် စိုက်ပျိုးထားသော နှမ်းစိုက်ခင်းများကို ဘူဒိုဇာဖြင့် ထိုး၍ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် တောင်သူများ၏ ပဲစင်းငုံ၊ ပြောင်းနှင့် နှမ်းစိုက်ခင်းများ ပျက်စီးခဲ့ရသဖြင့် ဒေသခံတောင်သူ ၁၀၀ ကျော်က အောက်တိုဘာလ၂၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လိပ်ခွံတောင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာ လမ်းခုလပ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ဇီးတော်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဦးစန္ဒာသီရိက မိန့်ကြားသည်။
“ရဲတွေက လိပ်ခွံတောင်ပေါ်မှရော၊ လက်ပံတောင်းနဲ့ လိပ်ခွံတောင်ကြားမှာရော၊ တောင်ခြေမှာပါ နေရာအနှံ့ တွေ့ရတယ်။ တောင်သူတွေက အလယ်မှာ ပိတ်မိသလို့ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အေးအေးချမ်ချမ်းပဲ ပြီးသွားပါတယ်” ဟု ဦးစန္ဒာသီရိက ဆိုသည်။
လျော်ကြေးရယူထားခြင်း မရှိသည့် ယာမြေတွင် စိုက်ပျိုးထားသော စိုက်ခင်းများ ဖျက်ဆီးခံရမှုနင့် ပတ်သက်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စက်ရုံမှူး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမြင့်အောင်ထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ၎င်းမှာ လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေကြောင့် ယင်းကိစ္စကို မသိရှိရ သေးကြောင်း ဖြေကြားပြီး ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခု အသိပေး ပြောကြားသဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ အဝင်ခေါ်ဆိုမှု ရရှိသော်လည်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။
အဆိုပါ စီမံကိန်းအတွင်းမှ ကြေးစင်တောင်နှင့် စံပယ်တောင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံများ တောင်းဆိုထားသော သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ မရရှိသေးခြင်း၊ မိုင်တိုင် ၄၄၆/၂ မှ ၄၄၆/၇ အထိ တည်ရှိနေသော ညစ်နွမ်းမြေများကို ဖယ်ရှားပေးမှု မရှိခြင်း၊ ဒေသခံများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် လိုအပ်နေသည့် ဆေးရုံစီမံကိန်းကို ပန္နက်တင်ပြီး ဆောက်လုပ်မှု မရှိခြင်း၊ မိုးကြိုး ဆာလ်ဖြူရစ် အက်စစ်စက်ရုံ၏ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု (ISO) လက်မှတ်နှင့် ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး လုပ်ဆောင်မှု မပြုခြင်း စသည့်အချက်များကို လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီက လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ရှိသေးကြောင်း လက်ပံတောင်းတောင် စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေ ၆၂၅၃ ဒသမ ၀၄၆ ဧက ကို လျော်ကြေးငွေလုံးဝ မပေးခြင်းနှင့် ဒေသခံများ တောင်းဆိုမှုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားသည့် အချက်များသည် မြေပြင် အခြေအနေနှင့် ကွာခြားနေခြင်း၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသည့် ဒေသခံများ၏ အသံကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ကုမ္ပဏီများက ဖွဲ့စည်းထားသည့် CSD အထောက်အကူပြု အဖွဲ့များ၏ တင်ပြချက်များကိုသာ လက်ခံခြင်းနှင့် ကျေးရွာဆက်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ပေးသည် ဆိုသည့်လမ်းများမှာ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သော အဆင့်မီလမ်းများ မဟုတ်ခြင်း စသည်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ က ပြန်လည်ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဆိုသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမီတက်နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီသည် ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် လူမှုဝန်းကျင် တာဝန်ယူသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (CSR) ကို ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီက အောက်တိုဘာလ ဒုတိယပတ်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မည် ဆိုခြင်းမှာ ကောင်းသော်လည်း စောင့်ကြည့်မည့် အဖွဲ့ မရှိသည့်အတွက် ယုံကြည်နိုင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း EcoDev အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းမျိုးသူက မှတ်ချက်ပြုသည်။
မိတ္ထီလာ မြို့နယ် ဂဠုန်ကုန်း ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ရှင်မြို့ ၊ ခါးကော့ ၊ ရွာမ ၊ မြင်သာ ၊ သဲတောလေး စသည့် ကျေးရွာ များမှ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်း သွားလာ အသုံးပြု နေသည့် နတ်စင်ချောင်း တံတားမှာ အောက် တိုဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ပျက်စီး ပြိုကျပြီး ချောင်းရေ ထဲ မျောပါသွား ၍ ကျေးရွာများ နေ ဒေသခံများ သွားလာရန် ခက်ခဲလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
'' နတ်စင်ချောင်း တံတားက အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်း မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းတဲ့ အတွက် ပထမ အကြိမ် ပြိုကျပြီး ကျေးရွာနေ ဒေသခံများက ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး ပြုပြင်ပြီး သွားလာ နေတာပါ ၊ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ ကတော့ ကိုယ်တတ်စွမ်း သလောက် လုပ်ရတာ ဆိုတော့ သေချာ ခိုင်ခံ့တဲ့ တံတားမျိုး မလုပ်နိုင် ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း အခု ချောင်းရေ တက်လာတော့ ပျက်စီး ပြိုကျ မျောပါ သွားတာပါ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးရွာ ဒေသခံ တွေကတော့ မြို့ကို မသွားမဖြစ် သွားရမယ် ဆိုရင် နတ်စင်ချောင်း တံတားအနီး က ချောင်းကူး မီးသံလမ်း ပေါ်ကပဲ ဖြတ်သန်း သွားလာ နေရတယ် . . . '' ဟု ရွာခံ တစ်ဦးက ပြောပြ၍ သိရသည်။
နတ်စင်ချောင်း တံတား ပြိုကျပျက်စီး ချောင်းရေထဲ မျောပါမှုကြောင့် ကျေးရွာများနေ ဒေသခံ များသည် မီးရထား သံလမ်းတံတား ပေါ်က ကူးဖြတ်တဲ့ အခါ သံလမ်း တံတားအလယ် ဇလီဖားတုံး တွေပေါ် ပျဉ်ပြားတွေ ခင်းပြီး အဲဒီအပေါ် ကနေ စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ်များ တွန်းပြီး ဖြတ်သန်း သွားလာ ရသည်။ (ပုံ) မီးရထား ဖြတ်သန်း ခုတ်မောင်းသည့် အချိန်တွင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ခြင်း ကြောင့် သုံးပေခန့်သာ ကျယ်သည့် မီးရထား သံလမ်း တံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်း သွားလာရခြင်း တို့ကြောင့် ဒေသခံများ အတွက် များစွာ အခက်အခဲ ဖြစ်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
အသက်(၂၆)နှစ်မှ (၄၅)နှစ်ကြား အမျိုးသား (၂၉)ဦး၏ သုက်သွေးကိုစမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ ယခုသုတေ သန ရလာဒ်ကို ပညာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
WiFi အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းသည် အမျိုးသားများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက သတိပေးလိုက်သည်။
ကွန်ပျူတာနှင့် Laptop များမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် Wireless ဖမ်းယူမှုလှိုင်းများသည် သုက်ကောင်များကိုပျက်စီးစေတတ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများအနေနှင့် Laptop များကိုပေါင်ပေါ်တင်ကာသုံးစွဲပါကသုက်ပိုးများကို ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက ထောက်ပြခဲ့သည်။
အသက်(၂၆)နှစ်မှ (၄၅)နှစ်ကြား အမျိုးသား (၂၉)ဦး၏ သုက်သွေးကိုစမ်းသပ်လေ့လာမှုအရ ယခုသုတေသနရလဒ်ကိုပညာရှင်များက
အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Wi-Fi လှိုင်းများသည် DNAကိုအနည်းဆုံး(၃)ရာခိုင်နှုန်းမျှ ပျက်စီးထိခိုက်စေပြီး (၄)နာရီမျှ ပေါင်ပေါ်
တင်သုံးပါကသုက်ကောင်များ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပေးစေရန် (၂၅)ရာခိုင်နှုန်းမျှထိဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း Fertility and Sterility ဆေးပညာ စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင့်အာဂျင်တီးနားမှ ပူးပေါင်း သုတေသီ အဖွဲ့တစ်ခုသည် ပရော်ဖက်ဆာကွန်ရာဒိုအဗန်ဒါနိုဦးဆာင်မှုဖြင့် WiFiစနစ်နှင့် သုက်ပိုးများ ထိခိုက်မှုကြားဆက်နွယ်နေခြင်းကို အဖြေရှာခဲ့သည်။“ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအရ WiFi ကို သုံးတဲ့အခါ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆင်ခြင်သင့်တာက ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး အချိန်ကြာကြာ Laptopသုံးတာမျိုးမလုပ်ဖို့ပါ။ ဒါဟာ သုက်သွေးDNAတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်”
ယခင်သုတေသနရလဒ်များအရ ပေါင်ပေါ်တင်သုံးသော Laptopများမှထွက်ပေါ်သော အပူသည်အမျိုးသားများ၏သုက်ပိုးများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ကုသိုလ်တော် ဘုရားဝင်း ရှေးဟောင်းကျောက်စာများ ခေတ်မီနည်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းရန် စီစဉ်
ကုသိုလ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိရှေးဟောင်းကျောက်စာချပ်အား တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - ခွန်စိုင်းအောင်
မန္တလေး ၊ အောက်တိုဘာ ၂၂
မန္တ လေးတောင်ခြေရှိ ကုသိုလ်တော် ဘုရားဝင်း အတွင်း နှစ်ပေါင်း၁၅၀ ကျော်သက်တမ်းရှိ ကျောက်စာ ချပ်များအား ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အဆိုပါကျောက်စာ ချပ်များ ရေရှည် တည်တံ့စေရေး အတွက် ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းရန် စီစဉ် လျက်ရှိကြောင်း ရှေးဟောင်းသု တေသန အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန(အထက် မြန်မာပြည်)မှ သိရသည်။
အဆိုပါရှေးကျောက်စာချပ် များရ၂၉ချပ်ရှိရာ တချို့တွင် ကွဲ အက်နေခြင်းနှင့်အတူ ကျောက် သားအတွင်း ပိုးဝင်နေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ခေတ်မီ ဓာတုဗေဒနည်းပညာဖြင့် အသုံး ပြုကာ ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောက်စာချပ်များ ရေရှည် တည် တံ့စေရေးအတွက် အနှောင့်အ ယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ ကိုလည်း ကုသိုလ်တော်ဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း ကာ တားမြစ်အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေ သန အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာ ကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန(အထက် မြန်မာပြည်)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဦးဟန်က ရန်ကုန်တိုင်းမ် နေ့စဉ်သတင်းစာသို့ ပြောသည်။
''အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီး သွားတွေကလဲ အရင်တုန်းကထက် ပိုမိုလာရောက်တာတွေ ရှိတဲ့အ တွက် အတွဲတွေ ချိန်းတွေ့နေတာ မျိုး၊ အညစ်အကြေးတွေစွန့်ပစ် ထားတာမျိုးတွေမရှိစေဖို့ ဂေါပက အဖွဲ့နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်း သု တေသနဌာနက တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန် စစ်ဆေးပေးနေပြီး ဂေါပက အဖွဲ့ကလဲ လုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ သန့် ရှင်းရေးပိုင်းအတွက် တာဝန်ယူ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်''ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ကုသိုလ်တော် ဘုရားသည် မန္တလေးမြို့တည်နန်းတည် သတ္တ ဌာနခုနစ်ဌာနတွင် တစ်ခုအပါ အဝင်ဖြစ်ရာ မဟာရံတံတိုင်းများ အတွက် မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်း တော်ကြီးပေါ်တွင် ပဉ္စမသင်္ဂါယ နာတင်ခဲ့သည့် ကျောက်စာချပ် များကို သီဟိုဠ် စွယ်တော် ကြုတ် ပုံ ဓမ္မစေတီများဖြင့် တစ်ချပ်လျှင် တစ်ဆူနှုန်းတည်ထားရာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးအဖြစ် ထင် ရှားပြီး ယခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းက ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်စာရင်းတွင် တရား ဝင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under မှုခင်း | No comments
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများကြရာမှ ယောက်ျားဖြစ်သူ ဆွဲကြိုး ချသေဆုံး ခဲ့မှုတစ်ခု အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဆို သည်။
ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးခဲ့သူမှာ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ကံ့ကော်ရိပ်သာလမ်းတွင် နေထိုင်သည့် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦး မောင်မောင်စိုး ဖြစ်သည်ဟုလည်း မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြုထားသည်။
၎င်းသည် အိမ်နောက်ဖေးခန်း ခေါင်မိုးထုတ်တန်းတွင် အရှည်ငါးပေခန့်၊ လုံးပတ် လက်မ၀က်ခန့်ရှိ နိုင်လွန် ကြိုးဖြင့် ဆွဲကြိုးချသေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သေဆုံးသူသည် ဇနီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရာမှ ယင်းကဲ့သုိ့ သေကြောင်းကြံစည်ခြင်း ဖြစ်ဟု ကနဦးအရ သိရှိထားရသည်ဟု ဆိုသည်။
သေဆုံးသူအလောင်းကို သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံသို့ ပို့အပ်ထားရာ ပီအာရ် ၇၇ ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးနေ သည်ဟုဆိုသည်။
ထုိ့ပြင် ယင်းသေဆုံးအား ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆက်လက်စစ်ဆေးဖော်ထုတ် ပေး ရန် ဒု-ရဲအုပ် ငွေမိုးကတရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ် စဉ် ၂၂/၂၀၁၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး စခန်းမှူးဖြစ်သူ ရဲမှူး သိန်းဟန်က စစ်ဆေးနေသည်ဟု တိုင်းရဲတပ် ဖွဲ့မှူးရုံး က ဆိုထားသည်။
ရွာသစ်ကျေးရွာ ရုတ်တရက်ဖယ်ရှားခံရမည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ
သီပေါ၊ အောက်တိုဘာ ၂၄။
သီပေါမြိ့နယ်၊ ရွာသစ်ကျေးရွာမှ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စခန်းသို့ သွားသည့် လမ်းဘေးရွာများ အတွင်းရှိ အိမ်အချို့အား ပိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းမှ ၀န်ထမ်းအချို့က လမ်းမလွတ်၍ လျော်ကြေးပေး၍ ဖယ်ခိုင်းရန်အတွက်ဟုဆိုကာ ၀င်ရောက် တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်သွားသောကြောင့် ရုတ်တရက်ဖက်ပေးရမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိကြေား ၎င်းကျေးရွာသားများက ပြောကြသည်။
အဆိုပါ ကျေးရွာမှ ကျေးရွာသားများမှာ ယခင်သီပေါမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဆင်ကျော့၊ ထန်စန့်၊ ကွန်ကောက်၊ ကွန်ဟိန်း ကျေးရွာများမှ နယ်မြေ အနေအထားအရ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လာကြသော ရွာသားများဖြစ်ပြီး ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စု အစွန်းပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“လာတိုင်းတော့ ဘယ်သူမှလည်း မပါဘူး သူတို့ဝန်ထမ်း(၄)ယောက်ပဲ ရုတ်တရက် ၀င်လာပြီး မီတာတွေနဲ့ သေချာတိုင်း သွားတာ ပြီးတော့ စကားပြန်ကို မေးကြည့်တော့မှ လမ်းချဲ့ဖို့အတွက် အိမ်တွေကို လျော်ကြေးငွေပေးပြီး ဖယ်ခိုင်းမယ်လို့ သိရတယ်”ဟု ရွာသစ်ကျေးရွာအတွင်း ၀င်ရောက်အတိုင်းခံရသော အိမ်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းသို့ တိုင်းတာရာတွင် ရွာသစ် ကျေးရွာ ခြသေ့င်္နှစ်ကောင်သိမ်အား ရှောင်၍ ရွာဘက်သို့ တိုင်းတာကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ တိုင်းတာရာတွင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ တစ်စုံတစ်ဦးမှ မပါရှိကြောင်း ဒေသခံများမှ ပြောကြသည်။ တိုင်းတာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းပြန်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် ဒေသခံများမှ စိုးရိမ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော့ကိုတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး။ ရွာရွှေ့ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သိရမှာ။ တိုင်းသွားတာလည်း မသိလိုက်ဘူး”ဟု ရွာသစ်ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
ယင်းသို့ တိုင်းတာရာတွင် ရွာအတွင်း အိမ်ခြံများအတွင်း ၀င်ရောက်တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်းတာမှုမှာ တစ်လခွဲခန့် ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း လမ်းခင်းမှုများသာ ပြုလုပ်လျက် ရှိနေပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် မည်သို့မှ အကြောင်း မပြန်သေးသဖြင့် ရုတ်တရက်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းလျင် ဒေသခံများအတွက် အခက် တွေ့နိုင်သောကြောင့် ဒေသခံများမှ စိုးရိမ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းရွာသားများက ပြောကြသည်။
ဒေါင်းပုံကဲ့သို့ဖြစ်နေသော ကျွန်းနက်သားအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လှူဒါန်းမည်
Posted by drmyochit Thursday, October 24, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
နောင်ချို၊ အောက်တိုဘာ ၂၄။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နောင်ချိုမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သို့ လုံခမ်း NLD ရပ်/ကျေးဥက္ကဋ္ဌမှ လာရောက်လှူဒါန်းသွားသော သဘာဝအလျောက် ဒေါင်းအမြီးသဏ္ဍာန်ပုံပေါ်နေသော ကျွန်းနက်သားအားအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နောင်ချိုမြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
“ဒီ ကျွန်းနက်သားတုံးကို လွှဆွဲရင်းနဲ့ တွေ့တာပါ၊ ပုံစံကြည့်လိုက်တော့ ဒေါင်းပုံပေါက်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရုံးကို လာလှူ သွားတာပါ၊ ကျွန်တော်တို့က ဒေါ်စုကို ပြန်ပြီးလှူဒါန်းသွားမှာပါ”ဟု နောင်ချိုမြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဒေါင်းပုံ ကျွန်းနက်သားတုံးအား အနည်းငယ်ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ထားပြီး ဒေါင်းပုံအား ရွှေချထားကြောင်း အလှူရှင် ကိုယ်တိုင်မှလည်း ဒေါ်စုအားလှူဒါန်းရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ လက်ရှိ ဥရောပခရီးစဉ်မှ အပြန်တွင် နေပြည်တော်၌ သွားရောက် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း နောင်ချိုမြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရှိရသည်။
ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ အမှိုက်ပုံအနီးရှိ ပြောင်းရွှေ့ရန် အမိန့်စာ ကပ်ထားသည့် ကျူးကျော်တဲတစ်ခုကို စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်
အဆိုပါ အမိန့်စာတွင် ကျန်စစ်သား ရပ်ကွက်၊ နောက်ဆုံး စွန့်ပစ်အမှိုက် ဧရိယာအတွင်း အောက်နယ်နိမိတ် သတ်ရာပါ (၃.၆၈) ဧက ခန့်ရှိ မြေတွင် အခွင့်အမိန့် မရရှိဘဲ လက်ရှိလုပ်ကိုင် နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် မြေမှ ထွက်ခွာ သွားရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမြေပေါ်ရှိ အစိုးရမင်းတို့ပိုင် ပစ္စည်းမှတစ်ပါး အခြားအရပ်ရပ် ပစ္စည်းများကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်း ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော် အောက်ပိုင်းမြို့ရွာရှိ မြေရာအက် ဥပဒေပုဒ်မ-၂၁ အရ ဆင့်ဆိုကြောင်း ဒလမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းဝင်း လက်မှတ်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
သေဒဏ်ပေးပြီး အသက်ရှင်သူကို နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်မပေးရန် အီရန်ဆုံးဖြတ်
အစိုးရ ရှေ့နေများက ဆွဲကြိုးချ သေဒဏ်ပေး ခံရသော်လည်း အသက်ဆက်ရှင်နေသည့် အကျဉ်းသား တစ်ဦးအား နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲသေ့ာ်လည်း တရားရေး အာဏာပိုင်များက ဒုတိယအကြိမ် ပြစ်ဒဏ်သည် လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့
အီရန် တရားရေး ဝန်ကြီးဌာနက သေဒဏ်ပေးခံရပြီး ဆက်လက် အသက်ရှင်နေသူ တစ်ဦးကို နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်ထပ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ အစိုးရ ရှေ့နေများက ဆွဲကြိုးချ သေဒဏ်ပေး ခံရသော်လည်း အသက်ဆက်ရှင်နေသည့် အကျဉ်းသား တစ်ဦးအား နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲသေ့ာ်လည်း တရားရေး အာဏာပိုင်များက ဒုတိယအကြိမ် ပြစ်ဒဏ်သည် လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အလီရီဇာဟုသာ သတင်းများက အမည်ဖော်ပြသည့် အမျိုးသား တစ်ဦးသည် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုကြောင့် သေဒဏ်ပေး ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရသည်။
သို့သော်လည်း ၎င်းသည် ရင်ခွဲရုံတွင် အသက်ရှင်လျှက်သား တွေ့ရှိရသည့်နောက် အငြင်းပွားစရာ အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ တရားရေးဝန်ကြီး မိုစတာဖာ ပူာမိုဟာမေဒီက "နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်ပေးမှုဟာ အီရန်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်သွားပါလိမ့်မယ်"ဟု ISNA သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ အစိုးရသည် တရားရေး ဌာနကို တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မှု မရှိသော်လည်း တရားခံ တစ်ဦးကို ဒုတိယအကြိမ် သေဒဏ်ပေးရန် သင့်မသင့် ကိစ္စတွင်မူ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တရားခံအား သေဒဏ်ပေးပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ၎င်း၏ မိသားစုက ရုပ်အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ရန် ရင်ခွဲရုံ၌ သွားရောက်ထုတ်ယူရာ အသက်ရှူနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အလီရီဇာ၏ လက်ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို တိတိကျကျ မသိရသေးသော်လည်း ISNAက ၎င်းသည် ကိုမာဝင်ကာ မေ့မျောနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အသက်(၃၇)နှစ်ရှိ တရားခံသည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အီရန် အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ ဘော့ဂ်ျနော့ဒ်မြို့ တွင် သေဒဏ်ပေး ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြိုးစင်တွင် (၁၂)မိနစ်ကြာ တွဲလောင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီး အကျဉ်းထောင် ဆရာဝန်ကလည်း သေဆုံးပြီဟု ကြေညာခဲ့သော်လည်း အသက်ရှင်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း ကို လတ်တလောတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဆေးရုံတစ်ခု၌ လက်ခံကုသပေးနေပြီး လက်နက်ကိုင် အစောင့် အကြပ်များ ချထားကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာရေး အဖွဲ့က အီရန်အစိုးရအား ယခုဖြစ်စဉ်တွင် နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်မပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သေးသည်။ ထို့အပြင် ယင်းအဖွဲ့ကြီးက အီရန်၌ သေဒဏ်ခံ အကျဉ်းသား အားလုံးကိုလည်း ပြစ်ဒဏ်မှ ဆိုင်းငံ့ထားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဗြိတိန်၏ အချမ်းသာဆုံး လူငယ်စာရင်းတွင် ပါဝင်လာသည့် ...
ထိုင်း ဘုရင့်ဂူ သင်္ချိုင်းအောက် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအု...
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက စည်းစိမ်ခံလွန်းသည့် ဂျာမန်ဘုန်း...
အိမ်ခြေယာခြေမဲ့နှစ်ဦးက ကလေးမွေးစားပြီး တောင်းရမ်း...
မိုင်လီနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုများအပေါ် အလေးမထားသည့် ဆယ်...
ရထား သန့်စင်ခန်းတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ရထားလမ်းပေါ်သိ...
ဓားစာခံများ အပြန်အလှန် လဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ ဆီးရီးယ...
ကင်မ်ဂျုံအန်မှာ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်း ရှိခဲ...
လျော်ကြေး မယူထားသော ယာမြေရှိ စိုက်ခင်းများ ဖျက်ဆီး...
မိတ္ထီလာမြို့နယ် တွင် နတ်စင်ချောင်း တံတား ပျက်စီးပြ...
ကုသိုလ်တော် ဘုရားဝင်း ရှေးဟောင်းကျောက်စာများ ခေတ်မ...
ဇနီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိစ္စ စကားများပြီး ယောကျ...
ရွာသစ်ကျေးရွာ ရုတ်တရက်ဖယ်ရှားခံရမည်ကို ဒေသခံများ စ...
ဒေါင်းပုံကဲ့သို့ဖြစ်နေသော ကျွန်းနက်သားအား ဒေါ်အောင်...
သေဒဏ်ပေးပြီး အသက်ရှင်သူကို နောက်တစ်ကြိမ် သေဒဏ်မပေး...